Ndị otu bọmbụ NYPD gbara gburugburu gburugburu ụlọ UN maka 'ngwungwu na-enyo enyo'
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ndị agha bọmbụ NYPD gbara gburugburu ụlọ UN maka 'ngwugwu enyo enyo'
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị agha bọmbụ NYPD gbara gburugburu ụlọ UN maka 'ngwugwu enyo enyo'
Ndị agha bọmbụ NYPD gbara gburugburu ụlọ UN maka 'ngwugwu enyo enyo'.
Ụlọ ahụ bụ ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ diplomatic Turkey dị na New York, gụnyere ozi na consulate, na-akwadokwa mmemme omenala ndị Turkey.
Achọpụtara ngwugwu a na-enyo enyo n'ihu Ụlọ Turkish dị na New York City.
Turk Evi (Turki House) meghere ọha na eze n'ọnwa gara aga.
Ụlọ ahụ bụ ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ diplomatic Turkey dị na New York.
Ngalaba ndị uwe ojii New York (NYPD) Bọmbụ squad a na-akpọ na mgbe a-enyo anyị enyo ngwugwu e chọpụtara n'ihu Turkish House na New York, na nso nso Mba Mbas ụlọ.
Polisifo no huu amane wɔ saa kwan yi so.
NYPD Ndị agha bọmbụ ewepụla ebe nwere oghere abụọ gburugburu ụlọ ahụ, nke dị na First Avenue na Manhattan.
Turk Evi (Turkish House) mepere ọha naanị n'ọnwa gara aga. Dị na ụlọ ọrụ nnọchite anya obodo-nke dị na East Midtown na United Nations Plaza, a na -ewu ya kemgbe afọ anọ.
Enwekwara ọtụtụ ebe obibi n'ime ụlọ ahụ.